दशैं पछि कता जाला सेयर बजार ? - Laltin.com
दशैं पछि कता जाला सेयर बजार ?
फुलपाती को दिन देखि दशैंको सार्वजनिक बिदा हुने भएकाले आहिले सेयर बजार नि बन्द छ। नेपालको सेयर बजार आजकल घटिरहेको अबस्थाम छ। २०७८ भाद्र तिन गते बाट नेप्सेमा गिरावट आउन शुरु भएको थियो। त्यसदिन नेप्सेले इन्ट्राडेमा आफ्नो अल टाइम हाइ बिन्दु (३२२७.११) बनाऊन सफल भएको थियो भने क्लोज चाँहि ३१८०.८६ बिन्दुमा भएको थियो। त्यस दिन पछि नेप्सेमा २१.३५% सम्म गिरावट आएको थियो।
दशैं को बिदा हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात असोज २५ गते नेप्से २६३९.३८ को बिन्दु मा बन्द भएको छ। अब नेप्से असोज ३१ गते बाट खुल्नेछ। दशैं पछी बजार कतातिर जाने हो भनेर लगानिकर्ता हरुमा एक्दमै कौतूहलता छाएको छ। बजार मा इतिहास दोहोरिइ रहेको हुन्छ, त्यसैले २०७० साल यता दशैं पछि बजार खुल्दा के भएको थियो भनेर यो रिपोर्ट तयार पारिएको छ।
२०७७ः यस साल दशैंको बिदा हुनु भन्दा अघिल्लो दिन नेप्से १६०६.२६ को बिन्दमा बन्द भएको थियो। दशैं पछि बजार खुल्दा नेप्से १६४७.३९ को बिन्दुमा ओपन भएको थियो भने २.४५% बृद्धिका साथ १६४५.६८ को बिन्दुमा बन्द भएको थियो।
२०७६ः यस बर्ष चाहि दशैं बिदाको अघिल्लो दिन ११४९.४० को बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से, बिदा पछि बजार खुल्दा ११४९.०३ मा ओपन भएको थियो भने -०.०३% गिरावटका साथ ११४९.०१ को बिन्दुमा बन्द भएको थियो।
२०७५ः २०७५ सालको दशैं अगाडि नेप्से १२४१.६३ को बिन्दु मा बन्द भएको थियो। बिदा पछी नेप्से खुल्दा १२४१.१५ को बिन्दुमा ओपन भएको थियो भने ०.३% बृद्धिका साथ १२४६.५२ को बिन्दुमा बन्द भएको थियो।
२०७४ः यस साल दशैंको बिदा हुनु भन्दा अघिल्लो दिन नेप्से १५४९.४६ को बिन्दमा बन्द भएको थियो। दशैं बिदा पछि नेप्से खुल्दा १५४९.४६ को बिन्दुमै ओपन भएको थियो भने ०.४५% बृद्धिका साथ १५५६.३५ को बिन्दुमा बन्द भएको थियो।
२०७३ः २०७३ सालमा दशैं बिदाको अघिल्लो दिन नेप्से १८१९.८८को बिन्दुमा बन्द भएको थियो। बिदा पछी बजार खुलेको दिनमा नेप्सेमा -०.८% ले गिरावट आएर १८०३.७४को बिन्दुमा बन्द भएको थियो।
२०७२ः २०७२ साल को दशैं बिदा अगाडि नेप्से ११२७.४२ को बिन्दुमा बन्द भएको थियो। बिदा पछी बजार खुलेको दिनमा नेप्सेमा -०.५७% ले गिरावट आएर ११२१.०५ को बिन्दुमा बन्द भएको थियो।
२०७१ः यस बर्ष बिदा अगाडि नेप्से ९३७.९३ को बिन्दुमा बन्द भएको थियो। बिदा पछी बजार खुलेको दिनमा नेप्सेमा -१.३६% ले गिरावट आएर ९२५.२१ को बिन्दुमा बन्द भएको थियो।
२०७०ः २०७० साल को दशैं बिदा अगाडि नेप्से ५६६.९९ को बिन्दुमा बन्द भएको थियो। बिदा पछी बजार खुलेको दिनमा नेप्से ०.८५% ले बढेर ५७१.८० को बिन्दुमा बन्द भएको थियो।
समग्रमा भन्नुपर्दा २०७० साल यता दशैं पछी बजार खुलेको दिनमा त्यति ठुलो परिबर्तन नभएको देखिन्छ। सबैभन्दा बढि बृद्धि (२.४५%) २०७७ सालमा भएको छ भने सबैभन्दा धेरै गिरावट (-१.३६%) २०७१ सालमा भएको छ।
Previous: नेप्सेले गुमाउँदै डाउनसाइड मोमेन्टम
Next: सेयर बजारको रोचक किस्सा: कसरी हुन्छ रु.२०० भन्दा रु.५०० सस्तो ?